ပြောင်း ပါကစ္စတန် ရူပီး (PKR) အွန်လိုင်း, ငွေကြေး ပွောငျး
ပါကစ္စတန် ရူပီး (PKR)
ပွောငျး ပါကစ္စတန် ရူပီး (PKR)
သငျသညျ ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ပါကစ္စတန် ရူပီး (PKR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးအွန်လိုင်းရန်။ ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး, နှင့် 2500 cryptocurrencies. ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ပါကစ္စတန် ရူပီး ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
ပါကစ္စတန် ရူပီး ၏ငွေကြေးဖြစ်ပါသည်: ပါကစ္စတန်. ပါကစ္စတန် ရူပီး ထို့အပြင်ဟုခေါ်သည်: ပါကစ္စတန်ရူပီး.
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် ပါကစ္စတန် ရူပီး လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ပြောင်း ပါကစ္စတန် ရူပီး ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေးရန်
ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00652ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ ယူရိုEUR€0.00544ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00471ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.006ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0546ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0405ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.141ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0247ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00816ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00843ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.13ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0507ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0365ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.486
ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0087ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00913ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.204ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0425ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.71ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩7.28ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.68ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.493ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.183
ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ BitcoinBTC0.0000001 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ EthereumETH0.000003 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ LitecoinLTC0.00003 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ DigitalCashDASH0.00003 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ MoneroXMR0.00002 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ NxtNXT0.107 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ Ethereum ClassicETC0.000338 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ DogecoinDOGE0.108 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ ZCashZEC0.00004 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ BitsharesBTS0.0567 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ DigiByteDGB0.0815 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ RippleXRP0.00697 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ BitcoinDarkBTCD21568.74 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ PeerCoinPPC0.00668 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ CraigsCoinCRAIG285164870.65 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ BitstakeXBS0.00263 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ PayCoinXPY2.61 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ ProsperCoinPRC652158.47 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ YbCoinYBC0.000004 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ DarkKushDANK200671575.64 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ GiveCoinGIVE1354533135.57 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ KoboCoinKOBO0.502 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ DarkTokenDT0.00601 ပါကစ္စတန် ရူပီးPKR သို့ CETUS CoinCETI90302209.04
100 XP to SPA2021-04-18 10:44:12
1 SPA to XP2021-04-18 10:41:54
10 SPA to XP2021-04-18 10:41:04
100 BEE to TWD2021-04-18 10:39:26
1 DOGE to BOG2021-04-18 10:37:10
9.0565 BEE to TWD2021-04-18 10:36:51
16000 AMD to RUB2021-04-18 10:30:50
1 XVC to USD2021-04-18 10:29:51
1 EUR to USD2021-04-18 10:14:29
1 BCD to DOGE2021-04-18 10:12:53
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 18 Apr 2021 10:45:02 +0000.